दलित जनप्रतिनिधीका लागि क्षमता विकास तालिम सम्पन्न - BG Media
Home समाचार जनप्रतिनिधि दलित जनप्रतिनिधीका लागि क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
दलित जनप्रतिनिधीका लागि क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
भेरीगंगा, सुर्खेत – भेरीगंगा नगरपालिका कार्यालय सुर्खेतका दलित जनप्रतिनिधीका लागि तीन दिने क्षमता विकास तालिम सोमबार सम्पन्न भएको छ । राजनैतिक, सामाजिक र जनताका मुद्धामा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गराउने र बोल्ने कलाको क्षमता विकास गराउने उद्धेश्यले तालिम सूरु भएको थियो । भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
तालिम समापनमा नगर प्रमुख चन्दले सहभागीलाई तालिममा सहभागी प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो । समापनमा मेयर चन्दले यस्ता तालिम सबै क्षेत्रका जनप्रतिनिधीका लागि जरुरी रहेको र अन्य बर्षमा आफुहरु यस्तो तालिम सिक्न आतुर रहेको बताउनुभयो । तालिम समापनमा बोल्दै प्रशिक्षक डा. मित्र परियार र कमल विके निर्मोहीले तालिममा सिकेका कुराहरु र सीपहरु व्यवहारमा सिक्न आग्रह गर्नुभयो । तालिममा कार्यपालिका सदस्यका तर्फबाट बोल्दै प्रतिक्षा विक र प्रेमसिँह सुनारले तालिम अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको र व्यवहारिक सिकाई भएको बताउनुभयो । आयोजकका व्यवस्थापक तुलविर बैगारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने सहजीकरण टेकेन्द्र बस्यालले गर्नुभयो ।
तालिममा नगरका १३ वडाका २८ जना दलित जनप्रतिनिधीको सहभागीता रहेको थियो । तालिम अवधिभर वरिष्ट संचारकर्मी कमल विके निर्मोही, समाजिक अभियान्ता डा. मित्र परियार, समाजसेवी प्रेमप्रकाश खड्काले दलित जनप्रतिनिधीलाई प्रशिक्षण दिनु भयो । भेरीगंगा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा छिनछिन मिडियाले तालिम आयोजना गरेको हो ।
Next articleGuidelines For Internet dating